रामेछापका प्रदीपले एक लाख जनालाई खाना खुवाए,भन्छन सामाजिक कार्यलाई निरन्तरता दिन्छु – E-Ramechhap
प्रकाशित मिति : ६ बैशाख २०७८, सोमबार १४:३५
रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका वडा नं ४ घर भएका समाजसेवी प्रदिप घिमिरे भन्ने वितिकै धेरैलाई याद आउँछ लकडाउनको बेलामा सडकमा अलपत्रमा परेका,काम विहिन भएर खान नपाएका गरिब, असहाय नागरीकलाई खाना खुवाउने व्यक्ति भनेर । सामाजिक सेवालाई नै आफ्नो कर्म मान्दै आएका समाजसेवी प्रदिप घिमिरे ‘अमूल्य’ लकडाउन भएदेखि नै पीडितहरुको घाउमा मल्हम लगाउन तल्लिन छन् ।
नेपाल सरकारले कोरोनाको महामारी फैलिन नदिनका लागि भन्दै २०७६ चैत ११ गतेदेखि नेपालमा लकडाउन शुरु गरेको थियो । पहिले एक साताका लागि भनेर गरिएको लकडाउन पटक–पटक थप हुँदै चार महिनासम्म लम्बियो । त्यससको असर अझै ताजै छ । त्यसमाथि फेरि पनि कोरोनाको संक्रमण उच्च गतिमा फैलिन थालिसकेको छ । लकडाउनका कारण दुःख र पिडामा परेर सडकमा पुगेका व्यक्तिहरुको मुख जोर्ने काम गरेका प्रदिप घिमिरेले लकडाउन पछिको एक वर्षमा झण्डै एक लाख जनालाई खाना खुवाइसकेका छन् ।
पहिले आफ्नै बलबुताले खाना खुवाउँदै आएका घिमिरेलाई पछि–पछि भने सहयोगी मनहरुलले सहयोग गरेका थिए । सबैको साथ र सहयोग पाएका घिमिरेले अहिले पनि अप्ठेरोमा परेर खान नपाएकाहरुलाई खाना खुवाउँदै आएका छन् । उनै समाजसेवी घिमिरेले गरेको काम र समाजसेवाका बारेमा अनलाईन नेपालमा प्रकाशित कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंले खाना खुवाउन कहिलेदेखि शुरु गर्नु भएको हो ?
तपाईंमा कसरी खाना खुवाउने चाहना पलायो ?
हालसम्म कति जनालाई खाना खुवाउनु भयो, तथ्यांक छ ?
खना खुवाउँदा कस्ता व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नु भयो ?
एक वर्षसम्म खाना खुवाउँदा कस्ता–कस्ता व्यक्तिहरु भेट्नु भयो ?
तपाईंले गर्नुभएको यो सामाजिक सेवाको प्रेरणाको स्रोत चाहिं कसलाई मान्नुहुन्छ नि ?
खाना खुवाउनको लागि आर्थिक पाटो कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ ?
विभिन्न व्यक्तिबाट सहयोग पाएको बताउनु भयो, सहयोग तपाईले माग्नु भएको कि उहाँहरुले स्वतस्फूर्त उपलबध गराउनु भएको हो ?
सहयोगी ति मनहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
फेरि पनि कोरोनाको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ, फेरि पनि आफ्नो सामाजिक कार्यलाई निरन्तरता दिने सोच बनाउनु भएको छ कि ?
तपाईं कुनै संस्थामा अवद्ध हुनुहुन्छ ?
तपाई आफूले आफैलाई कस्तो ब्यक्ति भन्न रुचाउनु हुन्छ ?
कोरोनाको महामारीमा सरकारले यो कार्य गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने केही लागेको छ ?